Ankizy matihanina: Inona no mahasambatra ny zatovo?
Zaza faly: tsy angano
Inona no mahatonga ny tanora hahita fifaliana?
Ny tebiteby persona dia efa ela ny fanamarihana ho an'ny zatovo, saingy ny fanadihadiana dia manaporofo fa ny fahasalamana ara-tsaina amin'ny zatovo dia lohahevitra manan-danja ankehitriny. Araka ny tranonkala loharanon-karena fanabeazana fototra, dia mihoatra ny 5000 ny mpianatra amerikanina ao amin'ny 7-12 taona manandrana mamono ny androm-piainany isan'andro. Manohy miteny ny tranonkala hoe: "Matetika ny tanora sy ny tanora no maty noho ny homamiadana, ny aretim-po, ny SIDA, ny tsy fahampian-tsakafo, ny pneoma, ny gripa ary ny aretin'ny havokavoka.
Ny maha-zava-dehibe ny fiantohana ny fifaliana ho an'ny zatovo dia lehibe lavitra noho ny hatramin'izay, indrindra fa mahita fiakaran'ny taham-pihetseham-po isika, ny faneriterena ny fiarahamonina hitady tombontsoa tsy azo tanterahina noho ny photoshop sy filters, ary ny tontolo iray izay toa mametraka lanjany bebe kokoa amin'ny laza sy noho ny fahafaham-po sy ny maha-izy azy manokana. Na izany aza, tsy ny rehetra no very. Ny fianarana dia manoro hevitra fa mety ho sambatra ny zatovo - amin'ny toe-javatra mety.
Na dia zatovo mahery vaika aza ny fiforonan'ny zatovo amin'ny fifandonana tsy miandany amin'ny zokiny, ny sary tahaka izany dia mety ho angano mihoatra noho ny zava-misy. Araka ny tatitry ny Psychology Today, ny fandalinana mpianatra 2 700 sy ny sekoly ambaratonga faharoa nataon'ny SADD (Mpianatra manohitra fanapahan-kevitra manimba) dia mampiseho fa ny ankamaroan'ny zatovo dia mitatitra fa sambatra isan'andro. Fanampin'izany, ny fanadihadiana nataon'ny SADD dia nanambara fa ny ankamaroan'ireo namaly dia nitatitra fa nanana fifandraisana tsara tamin'ny ray aman-dreniny izy ireo, ary ny fifandraisana tsara amin'ny raiamandreniny dia midika fa ny ankamaroany dia tsy misotro na mampiasa zava-mahadomelina.
Noho izany, raha ny fahendrena mahazatra dia mihazona fa manakorontana ny zatovo ary mampiseho fihetsika mampidi-doza toy ny fisotroan-dronono sy ny fampiasana zava-mahadomelina, ny tanora maro dia manao fihetsika tsara sy mifandray.
Inona avy ireo antony mahasarika tanora matihanina, ary ahoana no ahafahan'ny ray aman-dreny mampiadana tanora sambatra?
Misintona sy misoroka ny Media sosialy
Ny fikarohana dia naneho fa na dia adiny iray monja aza amin'ny media sosialy dia mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny fihetseham-pon'ny zatovo, dia eritrereto hoe inona no mety hataon'ny haino aman-jery sosialy iray manontolo.
Tsy midika akory ny fandraràna ny media sosialy tanteraka, fa midika kosa izany hoe miresaka amin'ny zanakao momba ny habetsaky ny fotoana tokony hividianana amin'ny media sosialy, ary ny fitadiavana fomba ahafahan'ireo zatovo hiala tanteraka tanteraka ary miaina amin'izao fotoana izao, IRL (amin'ny tena fiainana ). Na dia mety hanohitra aza izy ireo, dia afaka misaotra anao ny tanora zafikelinao.
Mieritreritra ny zavatra ankasitrahanay
Ankizy falifaly dia matihanina. Araka ny fikarohana nataon 'i Giacomo Bono, Ph.D., profesora ao amin'ny Oniversiten'i California, dia mankasitraka ny fahatsapana ara-pahasalamana maro ho an'ny zatovo. Ny 20% n'ny ankamaroan'ny tanora ao amin'ny fianarana Dr. Bono amin'ny olona 700 dia 15% izay noheverina fa ambany indrindra ny fankasitrahana farafahakeliny 20% noho ny fahatsapany ny dikany teo amin'ny fiainany ary nahitana 15% ambany noho ny fananana soritr'aretina. Ny fikarohana dia namintina hoe tokony hanampy ny zatovolahy hamboly fankasitrahana ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra, izay mety hitondra fahaiza-manao tena ilaina toy ny fiaraha-miasa sy faharetana. Ny zatovo izay afaka mampitombo ny fankasitrahana dia mahatsapa ny mahatsapa tsara kokoa ny fiainan'izy ireo, ary ny zatovo mankasitraka dia mifandray kokoa amin'ny hafa.
Miaina fiainana mahasalama: Eat Right and Exercise
Izany dia tokony ho toy ny tsy fanakambana ho an'ny ankamaroantsika, satria zava-dehibe ho an'ny olombelona amin'ny taona rehetra izany, fa manampy ny zatovo hahita ny fifaliana amin'ny fiainana salama dia lesona manan-danja teo aloha teo amin'ny fiainana.
Araka ny tatitra nataon'ny Science Daily, ny tanora izay mamboly fahazarana mahasalama dia lasa sambatra kokoa. Araka ny Fifandraisana Society, ny fikarohana nataon'ny Fikambanana ara-toekarena ara-tsosialy sy sosialy (ESRC) izay nahita tanora 5.000 tany Royaume-Uni, teo anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 15 taona, dia efa inefatra avo enina heny ny tanora tsy niezaka nisotro toaka dia mitatitra ny hasambarana avo lenta kokoa noho ireo izay nanandrana nisotro toaka. Ireo zatovo izay nifoka sigara dia in-dimy isa hitera-doza ho sambatra. Ankoatr'izay, ny fihenan'ny voankazo sy ny legioma ary ny fandraisana anjara amin'ny fanatanjahantena dia mifandray amin'ny haavon'ny hafaliana. Noho izany, ny fampiofanana ireo tanora faly dia midika fa ny fihazonana azy ireo ho salama sy mavitrika.
Araka ny fandinihana iray hafa notaterin'ny US News, ny zatovo izay nandray anjara mavitrika tamin'ny asa an-kalamanjana dia nahafinaritra kokoa noho ny namany izay nandany fotoana teo anoloan'ny solosaina sy horonan-tsary.
Raha tanora maro no tia manao lalao video ary sekoly maro no mampiasa iPads any am-pianarana, ny ray aman-dreny izay mitaiza ny zatovo dia tokony hanao dingana mba hampihenana ny fotoana fijerena ny zatovo ary ahazo azy ireo any ivelany. Ny zatovo mahafinaritra dia miara-mandany fotoana bebe kokoa amin'ny hafa ary mandany fotoana bebe kokoa any ivelany fa tsy sambatra kokoa, namana mitovy amin'ny ankizy. Noho izany, ataovy izay hahatonga ny zanakao hifaneraserana amin'ny ekipa, klioba na vondrona hafa izay mahazo azy hiala sy hifanerasera amin'ny tanora hafa mitovy taona aminy.
Ny maha-zava-dehibe ny fahasambarana amin'ny fahazazana
Ny tombony azo amin'ny tanora zandriny dia mihoatra ny taom-panatanterany. Araka ny notaterin'ny lahatsoratra vaovao vao haingana, ny fandalinana, toy ny iray nataon'ny Oniversite College London sy ny Oniversiten'i Warwick izay nandinika ny fanadihadiana Amerikana 10,000, dia nahatsikaritra fa ny tanora salantsalany dia nitatitra ny salanisa ambony kokoa tamin'ny fotoana nahatratra 29 taona. , zatovo mahafinaritra dia nahazo 30% mihoatra noho ireo namana tsy dia faly loatra, eny fa na dia mihevitra ireo fari-pahalalana hafa toy ny IQ sy ny fianarana ambony aza.
Na dia tsy isalasalana aza fa mety ho sarotra indraindray ny fiterahana, dia misy ihany koa ny angon-drakitra maro izay mety ho fotoana famoronana, fangorahana ary fifandraisana amin'ny olon-dehibe sy ny olon-dehibe. Ary ny fanadihadiana dia mampiseho koa fa zava-dehibe amin'ny zatovo ny hahatsapana fahasambarana ho an'ny fahatsarany amin'ny hoavy. Mahaliana fa tsy nisy fiantraikany teo amin'ny fahasambaran'ny zatovo ny vola miditra. Na dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahasambaran'ny zaza aza ny fahantrana faraidiny dia tsy mila manankarena ny zatovo mba hahatsapa fifaliana. Ny tanora dia mandanjalanja ny fiaraha-mientana ara-tsosialy izay mampitombo ny fidiram-bola ho azy ireo, fa tsy mandanjalanja ny vola miditra ho an'ny tenany.
Ny zatovo dia sambatra indrindra rehefa mifandray amin'ny hafa, tsy voatery rehefa mividy entana.
Ny Fianakaviana Ny Fianakaviana Ankehitriny
Ny dikan'ny hoe kely noho ny mahafinaritra ireo voninkazo malaza 13
Fomba fianarana ho an'ny taona faha-9
Fampidirana ny Anthropology Visual
Inona ny pseudoscience?
Lisitry ny natiora natoraly avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao
Ahoana no ahafahanao manampy aorian'ny fisarahana?
Seven Card Horseshoe Tarot niely
'Fur Elise' nataon'i Ludwig van Beethoven
Famaritana sy ohatra fampisarahana
"The Cats The Hungry Very Hungry" nataon'i Eric Carle
Ny ligy Ivy League sy ny universités avy ao Etazonia dia mifanaraka
Ny ohatra nasehon'i Clausius-Clapeyron ohatra
Gilaogin'ny gilasy: Tena zava-dehibe ve ny ao amin'ny klioban'ny Golf?
5 tsara indrindra fanta-daza sy mpihetsiketsika puppet
Ny anarana hoe SCHMIDT sy ny tantaram-pianakaviana
King Francis I avy any Frantsa
Henry Brown - Mpamorona
Cyndi Vanderheiden - Afo an'ny Speed ​​Freaker mpilalao
Ahoana ny famintinana teti-bola
Antanaclasis (teny filalaovana)
Museum Museum of Natural History (New York, NY)
Bungalow Homes - Sarin'ny trano maoderina maoderina
Ny Fikomiana Mena Turban any Shina, 1351-1368
Ny Stylistics Profile